အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ငခူရဒေသမှာ လုံခြုံရေး တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချထားသလို၊ လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်သမားတွေကို လိုက်လံရှာဖွေနေပြီး သံသယရှိသူတစ်ချို့ကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း မောင်တောအခြေစိုက်၊ နယ်စပ်ဒေသ လူဝင်မှုစစ်ဆေးမှုကွပ်ကဲရေး ဌာနချုပ်၊ ဒုတိယ ကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးထူးလှိုင်က RFA ကို ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဘူးသီးတောင် ကျေးရွာတစ်ရွာ ညအချိန် အိမ်ပြင်မထွက်ရ
ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောမှာ ညမထွက်အမိန့် ၃ လ သက်တမ်းတိုး
These are most likely AA (Arakan Army) resurgents.
Feb 14, 2013 06:50 PM
Myanmar army!!!!!!! Please fight all. Don't want to be even one.
Authority needs to go after actual culprit if so, but not general law abiding people.
Beware of Trouble Makers. Watch out those who are looking for opportunities to fish in trouble waters.
Feb 12, 2013 08:17 PM
Mi Su 885
What is Myanmar Army doing? Go and drive out these armed terrorists.
Feb 12, 2013 09:35 AM